Wareegto kasoo baxday xafiiska gobollada iyo siyaasadda ee Al-shabaab ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo xilkan laga qaaday sannadkii 2011, markaasoo ay inta badan Muqdisho ay ka talinaysay Al-shabaab.
"Maanta laga billaabo waxaa xilka guddoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay, Sheekh Clai Maxamed Xuseen (Abuu-Jabal)" ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xafiiska siyaasadda iyo gobollada Al-shabaab shalay oo Sabti ahayd.
Qoraalkan ayaa lagu sheegay in sidoo kale isbedel weyn lagu sameeyay maamulka gobolka Banaadir, iyadoo isbedelkan lagu sheegay in lagu dar-dargelinayo howlaha Al-shabaab ee gobolka Banaadir.
Magacaabistan cusub ee maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay imaanaysaa xilli Xarakada Al-shabaab ay tan iyo sannadkii hore isaga baxaysay degmooyinkii ay kaga sugnayd gobolka Banaadir, kaddib culus badan oo la saaray Al-shabaab.
Xarakada Al-shabaab ayaa sidoo kale lumisay dhul ballaaran oo ay kaga sunayd gobollada Koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo ay ku jirto degmada Kismaayo oo ahayd goobta ay sida aadka ah ugu xoogganaayeen.